I-China Ukutshiza i-Cellulose Fibre yokuKhusela kunye nokuNcitshiswa kwesandi somenzi kunye noMthengisi | Longou
Ukutshiza iSelulose Fiber Umboniso weMifanekiso
Ijimi, imizi-mveliso, iiTheminali, iiVillas, izakhiwo zeNdlu, iiOfisi, Amaziko ezeMidlalo, Amagumbi ezixhobo zoomatshini nezixhobo zombane, Iindawo ezinjengeehotele, iiBhari, iKTV, njl.
Ukusebenza ezintandathu aphezulu ukutshiza neselulosi ifayibha:
1. Ukunciphisa isandi kunye nengxolo
Imicu yendalo inesakhiwo esinyukayo. Bangakwazi ukuwangenisa ngokuvakalayo amandla esandi, banciphise kwaye basuse ingxolo kwaye banokufafazwa kumphandle wesakhiwo ngokuthe ngqo, kodwa don’ichaphazele indawo yoqwalaselo yoqobo.
2. Ukufudumeza ubushushu
Iseli yeselulose ukuxhathisa kobushushu ukuya kuthi ga kwi-7.7R / in, ukungalingani kokuqhutywa kwe-thermal ngu-0. 0039 w / mk, Ngokwakhiwa kwesitshizi, kwakha ubumbano emva kolwakhiwo, kuthintela ukuhanjiswa komoya, ukwenza ukusebenza ngokugquma kakuhle kunye nokufezekisa injongo yolwakhiwo lokonga amandla.
3. Ukudodobalisa umlilo
Ngokusetyenziswa okukhethekileyo, kunesiphumo esihle kakhulu kwilangatye elidangayo. Itywina elisebenzayo linokuthintela ukutsha komoya, ukunciphisa izinga lokutsha kunye nokunyusa ixesha lokuhlangula.
4. Ukuvavanywa kwezinambuzane kunye nokungqinisisa ukungunda
Ineziphumo ezifanelekileyo zokulawulwa kwezinambuzane.
5. Impilo nokhuseleko
I-100% yefayibha yeselulose yendalo, ayiqulathanga umqhaphu wesilicate okanye ifayibha yeglasi. Ayiyityhefu kwaye ayicaphukisi kwaye ayicaphukisi ulusu kunye nendlela yokuphefumla. Ngesalathiso sokhuseleko oluphezulu, ayinakuqinisekisa kuphela impilo yabahlali, kodwa ikwaqinisekisa impilo yabasebenzi.
6. ufakelo lula
I-ecocell yokutshiza i-cellulose fiber isebenza ngomatshini okhethekileyo kunye nezixhobo zokwenza ukutshiza ulwakhiwo. Ngokwesiqhelo, isixhobo sidinga kuphela abasebenzi aba-2-3, iimitha ezingama-300-500square zemisebenzi yokutshiza ngokomndilili inokugqitywa ngemini, kuxhomekeke kwimeko yokwakha indawo. Ukutshiza i-cellulose fiber kuxabisa iiyure ezingaphantsi komsebenzi kunezinye izinto ezifanayo kwaye kungagcina iindleko ngokungangqalanga.
Egqithileyo IGranular Cellulose Fibre kulwakhiwo lwendlela lweSMA
Okulandelayo: Ukwakha iMortar eyongezelelekileyo yesitashi kunye nokugcinwa kwaManzi
Ukuphucula ubomi benkonzo
Inkqubo yokuvala isandi
Futha ifayibha yeselulosi